New Sony Bravia XR TV oo la jaan qaadaya AirPlay iyo HomeKit | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu ku sii badanayaa joogitaanka qalabka noocyada kale. Wuxuu ku fulinayaa gudaha TV-yada LG, ee labada kombiyuutar ee microsoft sida ka Sony. Isbahaysiga dambe ma aha oo kaliya inuu halkaas sii joogo maxaa yeelay shirkaddu waxay ku dhawaaqday wax yar ka dib telefishinnada cusub ee Bravia XR ayaa laga bilaabi doonaa suuqa. si buuxda ula jaan qaadaya AirPlay iyo HomeKit.
AirPlay waa borotokoolka uu abuuray Apple kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka bedesho waxyaabaha ka socda Mac, iPad, iPhone telefishanka ama siteryo. HomeKit waa suurtogalnimada in loo rogo gurigeenna mid caqli badan. Labada hab maamuusba waxay noqon doonaan kuwo iswaafajiya 100% oo leh telefishanka cusub ee Bravia XR.
Sony ayaa sharad ku gashay Apple iyo telefishannadeeda cusub oo leh processor-keeda garashada garashada ee XR, oo leh barashada mashiinka (ML) iyo Sirdoonka Cilmiga ah (AI), waxaan ka heli karnaa howlaha gudbinta waxyaabaha iyo xakamaynta caqliga aaladaha Apple.
Sony waxay leedahay isticmaaleyaashu waa inay ordaan macruufka 12.3 ama ka dib ama macOS 10.14.5 ama ka dib adeegsiga shaqooyinkan. Waxay ku habboonaan doonaan seddex moodal oo hoos imanaya astaanta Bravia XR. Tan waxaa ka mid ah Master Series Z9J 8K LED, Master Series A90J / A80J OLED, iyo Masters Series X95J / X90J 4K LED. Muuqaalka ugu muhiimsan wuxuu ku lug leeyahay XR Cognitive Processor oo sameeya fiidiyoow firfircoon iyo falanqeyn maqal ah si loo bixiyo madadaalo heer sare ah.
Ma noqon doonto illaa guga sanadkaan 2021 marka aan ku aragno telefishanadan suuqa. Taasi waa marka aan ugu dambeyntii ogaanno qiimaha makiinadaha madadaalo ee guriga. Haddii aan sidoo kale ku darno qalabkan cusub ee neerfaha, iswaafajinta Apple, fursadaha ayaa kor u kacaya.
Ka eeg Apple TV + waxyaabaha ku jira telefishannadan ama ku raaxayso Habboonaanta Apple + Waa inay noqotaa wax lala yaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » New Sony Bravia XR TV oo la jaan qaadaya AirPlay iyo HomeKit
IMac-kii ugu horreeyay ee xilligii Apple Silicon ayaa la bilaabi karaa bisha Maarso